Posts - Caasimada Online
Zahra Axmed Gacal - July 2, 2022
Hargeysa (Caasimada Online) - Allaha u naxariistee waxaa caawa magaalada Hargeysa ku geeriyootay Fanaanadii weyneed Khadra Daahir Cige oo muddooyinkaan ku xanuunsaneed Hargeysa. Qaar ka mid ah ehellada Marxuum Khadra Daahir oo ku sugan Hargeysa ayaa Caasimada Online u xaqiijiyey geerideeda. Waxay ku geeriyootay Isbitaal mudooyinkii dambe lagula tacaalaayey xaaladeeda caafimaad oo ku yaalla magaalada Hargeysa. Khadra Daahir Cige ayaa ka...
Muqdisho (Caasimada Online) - Sida ay Caasimada Online u xaqiijiyeen ilo xog-ogaal ah, Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa berri u safraya magaalada Ankara, kadib casuumaad rasmi ah oo dowladda Turkiga uu ka helay. Wafdiga Madaxweynaha ayaa markii ay tagaan Turkiga wuxuu Xasan Sheekh la kulmi doonaa Madaxweyne Erdogan, isagoo kadibna la kulmi doona jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas. Sidoo...
Saalax Saciid Sabriye - July 2, 2022
Muqdisho (Caasimada Online) - Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa la filayaa inay bixiso shatiyada laba Banki oo mid laga leeyahay waddanka Turkiga midna laga leeyahay dalka Masar. Arrintaan ayaa dib u dhacday dhowr jeer kadib markii nidaamkii madaxweyne Farmaajo uu ka caga jiiday in ogolaansho ganacsi la siiyo labadaasi Banki, sababo la xiriiray saameyntii ay Itoobiya ku laheyd Soomaaliya. Bankiga Ziraat...
Sawirro: Masjid aan noociisa horey loogu arag oo laga furayo magaalada Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) - Warbaahinta ayaa maanta loo soo bandhigay Masjid cusub oo dhawaan laga furi doono magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kaasi oo ku yaalla degmada Waaberi, gaar ahaan agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Waxaa qarashka lagu dhisay masjidka bixiyey ganacsadaha weyn ee Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale, kaasoo masjidka ugu magac daray Aabihiis Cali Jimcaale Allaha u naxariistee. Sheekh...
Taageerayaasha Rooble oo xeelad nooc cusub ah uga adkaanaya kuwa Farmaajo
Muqdisho (Caasimada Online) - Maalmihii ugu dambeeyey waxaa si weyn u xoogeystay dagaalka baraha bulshada ku dhex maraya taageerayaasha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha xilka ka dagay Maxamed Xuseen Rooble, kaasi oo hadda u muuqda inuu weji kale yeeshay. Taageerayaasha madaxweynihii hore ee Farmaajo ee baraha bulshada looga yaqaano CBB ayaa maalmihii ugu dambeeyey sii...
Asad Cabdullahi Mataan - July 2, 2022
Brussels (Caasimada Online) – Midowga Yurub ayaa ku dhowaaqay inuu dib u billaabi doono lacagihii uu ku taageeri jiray dowladda federaalka ah Soomaaliya oo xayirnaa muddo ka badan sanad. Taageerada Midowga Yurub ayaa la joojiyey ayada oo looga jawaabayo markii dowladda federaalka ay ku guuldarreystay inay qabato doorashooyin kadib markii uu dhammaaday muddo xileedkii madaxweyne Farmaajo 7-dii Februray 2021. Madaxa Iskaashiga...
Kismaayo (Caasimada Online) - Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo maanta la kulmay wakiilada hay’adaha kala duwan ee ka howlagala deegaanada Jubaland ayaa soo saaray amar culus. Kulankan waxaa diiradda lagu saarayey sidii hay’adaha ka howlagala guud ahaan Jubaland ay gacan oga geysan lahaayeen taakuleeynta dadka ay abaaruhu saameeyeen ee kunool deegaanada Jubaland iyadoo oo lagu amray hay’adaha...
Ilhaan Cumar: Nin Soomaali ah ayaa aniga oo daawanaya lagu dhuftay 38 xabbadood
Caasimada Online - July 2, 2022
Ilhaan Cumar, oo ka mid ah xildhibaannada Aqalka Wakiillada Mareykanka, ayaa ka qayb gashay shir ay bulshada ka yeesheen arrimaha qalalaasaha hubka, waxa ayna isbarbardhig ku samaysay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo magaalada Minneasopolis. Ilhaan ayaa sheegtay dhinaca qalalaasaha ay Minneapolis ku liidato marka lala barbardhigo xeryada Dhadhaab. "Muddo lix sano ah waxaan nasiib u yeeshay in aanan arkin wax qalalaase...
Istar Cabdi Yuusuf - July 2, 2022
Muqdisho (Caasimada Online) - Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar oo haatan ah Ergayga gaarka ah ee Geeska Afrika, Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ayaa soo saaray qoraal dheer oo uu kaga hadlay munaasabadaha soo dhaweynta ah ee ay ardayda Soomaaliyeed ee wax kusoo bartay dibadda u sameeyeen ra'iisul wasaaraha cusub Soomaaliya, waxaayana ugu dambeeyey ardayda...
Tarsan oo shaaciyey arrin ay Soomaaliya iyo Kenya ku qasban yihiin inay sameeyaan
Nairobi (Caasimada Online) - Danjiraha Soomaaliya u jooga magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya ayaa ka hadlay xiriirka ka dhexeeya labada dowladood, kaas oo maalmihii lasoo dhaafay soo hagaagayey, kadib doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Tarsan oo la hadlayey Wariyeyaasha ayaa shaaca ka qaaday in labada dal oo daris ah aysan kala maarmin, isla-markaana ay labada dhinacba baahi u qabaan...
Nin hubeysan oo weerar ka geystay BAARDHEERE oo isna toogasho lagu dilay
Baardheere (Caasimada Online) - Wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa ku warramaya in maanta nin hubeysan uu weerar ka geystay degmada Baardheere, kaas oo markii dambe isna toogasho lagu dilay, sida ay shaaciyeen saraakiisha laamaha amaanka. Ninka hubeysan oo la sheegay inuu ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay askari ka tirsan ciidamada nabad sugida iyo...
Villa Somalia oo shaacisay inay dhinteen qaar kamid ah wiilashii loo qaaday Eritrea
Muqdisho (Caasimada Online) - Afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo marti ku ahaa barnaamij ka baxay TV-ga Somali Cable ayaa si cad u sheegay in qaar kamid ah dhalinyaradii tababarka looga qaaday dalka Eritrea ay siyaabo kala duwan u dhinteen. Cabdikariin ayaa intaas raaciyey in dhalinayada dhimatay waalidiintood ay akhbaartu gaartay, isagoo balan qaaday in waalidiinta aan helin xogta...
Sawirro: Puntland oo xal u heshay shidaal la’aantii ka jirtay deegaannadeeda
Boosaaso (Caasimada Online) - Puntland oo ah dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee ka aas-aasmay dalka ayaa xal u heshay shidaal la'aan muddooyinkii lasoo dhaafay ka jirtay deegaanada maamulkaasi, waxayna keensatay markab weyn oo sida shidaal fara badan. Markabka oo maalmihii lasoo dhaafay taagnaa xeebaha Puntland ayaa xalay kusoo xirtay dekedda weyn ee Boosaaso, iyadoo halkaas ay buux dhaafiyeen booyadaha shidaalka. Wararka...
Xasan oo dalab culus u diray Jaamacadda Carabta
Muqdisho (Caasimada Online) - Ergeyga arrimaha bani'aadanimada iyo abaaraha Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa xalay fiidkii dhambaal qoraal ah oo uu ka siday Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u gudbiyay Xoghayaha Guud ee Ururka Jaamacadda Carabta Mudane Axmed Abul Gheit. Ilyaas Sheekh Cumar Abuu Bakar oo ah Danjiraha JFS ee Masar ahna Wakiilka Joogtada ah ee Soomaaliya u fadhiya Jaamacadda Carabta,...
Hoggaamiyaha Taalibaan ee loo haystay inuu dhintay oo lagu arkay meel fagaare ah
Kabul (Caasimada Online) - Hoggaamiyaha qarsoodiga ah ee ururka Taliban ayaa booqashadiisii ugu horraysay ku tagay magaalada Kabul ee caasimadda u ah waddanka Afghanistan, sida ay sheegeen saraakiisha Taliban. Mullah Hibatullah Akhundzada ayaa lagu soo warramay in uu khudbad ka jeediyay kulan ay ku sugnaayeen qiyaastii 3,000 oo aqoonyahanno diimeed ah, kuwaasoo isugu yimid si ay uga wadahadlaan arrimaha ku...
KENYA oo shaacisay inay howlgal ku dishay 10 ka tirsan kooxda Al-Shabaab
Nairobi (Caasimada Online) - Warsaxaafadeed kasoo baxay milatariga Kenya ayaa lagu faah-faahiyey howlgal ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah dalkaasi, gaar ahaan deegaanada u dhow xadka dalka Soomaaliya, kaas oo lagu dilay xubno ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Kenya ayaa shaaca ka qaaday in howlgalkaas oo ka dhacay inta u dhexeysa deegaanada Sariira iyo Kulbiyow oo ka tirsan Keymaha Boni...
Zahra Axmed Gacal - July 1, 2022
Garbahaarey (Caasimada Online) - Cali Xaashi Cumar oo ahaa madaxii amniga gobolka Gedo, xilligii Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa soo saaray qeylo dhaan ku socota dowladda federaalka, isagoo ka deyriyey xaaladda ka jirta gobolkaas. Wuxuu sheegay in gobolku uu si gelayo go’aan nololeed oo aad u adag, isagoo fariimo u kala diray dhinacyo kala duwan oo ku lug-leh xaaladda cakiran ee gobolkaas. Sidoo...
Cali Guudlaawe oo dagaal ku dhawaaqay, isagoo ku laabtay magaalada Jowhar
Jowhar (Caasimada Online) - Madaxweynaha dowlad goboleedka HirShabeelle Cali Cabdullahi Xuseen (Cali Guudlaawe) oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda HirShabeelle ayaa islaamiyey guluf dagaal oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa kulamo kala duwan la yeeshay madaxda dowladda federaalka, sida madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha cusub ee dalka. Afhayeenka...
Asad Cabdullahi Mataan - July 1, 2022
Garoowe (Caasimada Online) – Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa yaboohay inuu si buuxda ula shaqeyn doono dowladda madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra’iisul wasaare Xamza Cabdi Barre. Deni ayaa hadalkan xalay ka sheegay xarunta madaxtooyada Puntland oo uu kaga qeybgalay munaasabadda 1-da Luulyo ee lagu xusayo sannad guuradii 62-aad ee kasoo wareegatay markii ay xorriyada qaateen gobollada Koonfureed ee...
Lafta-gareen: Somalia waxay gashay gumeysi qarsoon
Saalax Saciid Sabriye - July 1, 2022
Baydhabo (Caasimada Online) - Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen oo xalay hadal ka jeediyey xaflad loogu dabaal dagayey 1-da Luuliyo oo lagu qabtay Baydhabo ayaa sheegay in xilligii Soomaaliya ay ka xuroobeysay gumeystihii Talyaaniga iyo Ingiriiska ah ahaayeen kuwo mideysan oo ay ka go’neyd in dadka ka dambeeyabay xurnimo ku noolaadaan. Lafta-gareen ayaa nasiib darro ku...
123...2,774Page 1 of 2,774